September 25, 2020 - Amawpyay
ဝတဲ့မိန်းကလေးကိုသာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ယောက်ျားလေးများ အနေဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုသည့် အခါ ဝသော မိန်းကလေးများကိုသာ အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ် သင့်ပါ သည်။ မနက်အိပ်ရာ နိုးသည်နှင့် ပိန်သော မိန်းကလေး များသည် အလှအပ ပြင်ဆင်ချိန်တွင် ဖတ်တီးမလေးများသည် မနက်စာ စားရန် ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဈေး ဝယ်ရာတွင် ငပိန်မ များသည် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းရန် ဝယ်ယူ ရပြီး ဖတ်တီးမလေးများ သည် စားကောင်းမည့် အရာများသာ ဝယ်ယူ ရပါ သည်။ ငပိန်မ များသည် အလှအပ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ဈေးဖိုးချွေတာ နေချိန်တွင် ဖတ်တီးမလေးများသည် …
ထိုက်တန်ရင် ကိုယ့်ဆီကိုပဲ ရောက်လာ မှာပါ
ထိုက်တန်ရင် ကိုယ့်ဆီကိုပဲ ရောက်လာ မှာပါ ကိုယ်အရမ်း ချစ်ရတဲ့ သူကို ဆုံးရူံးရမှာ ကြောက်နေလား ။ မကြောက်ပါနဲ့ ။ သင်သာ အကောင်းဆုံး ထိုက်တန်သူ ဖြစ်ပါစေ သင့်ဆီ ရောက်လာ မှာပါ ။ ကိုယ်က အရမ်း တန်ဖိုးထား ရသူက ကိုယ့်အနား ကနေ ရှင်ကွဲ ကွဲထားခဲ့မှာ ကြောက်နေလား ။ မကြောက်ပါနဲ့ ။ သင် အရမ်းကြီး မျှော်လင့် ထားရင် အများကြီး နာကျင် ခံစားရ တတ်ပြီး သင်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ သူ ဆိုရင် သင်မောင်းထုတ် ရင်တောင် သင့်အနားက ထွက်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ …
ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ အချစ်တတ်ဆုံးအမျိုးသမီး ဟောဒီ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ အချစ်တတ် ဆုံး အမျိုးသမီး ၊ ရိုမန်တစ် အဆန်ဆုံးအမျိုးသမီးက ဘုရား အလောင်းတော် သိဒ္ဓထ္ထ မင်းသားရဲ့ ကြင်ယာတော် ..ယသော်ဓယာဒေဝီပဲ ။ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင် လက်ထက် မတိုင်မီ ရှေ့ဘုရားရှင် တစ်ဆူ လက်ထက်မှာ ကထဲက ပါရမီဖြည့်ဖက် အဖြစ် ဆုတောင်းခဲ့ တယ် ။ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင် လက်ထက်မှာ ဗျာဒိတ်ပေးတော့ လည်းသုမေဓာရသေ့လေးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးလွန်းလို့ ပါရမီဖြည့်ဖက် ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ တယ် ။ တကယ့် Platonic Love ပဲ ။ နောက်ဆုံး ဘဝမှာ …ကြင်ယာတော် သိဒ္ဓထ္ထ မင်းသားတော …
ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမဲ့ လမ်းခွဲချင်နေမှန်းသိသာစေတဲ့ ယောကျာ်းတွေရဲ့ အပြုအမူများ
ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမဲ့ လမ်းခွဲချင်နေမှန်းသိသာစေတဲ့ ယောကျာ်းတွေရဲ့ အပြုအမူများ သမီးရည်းစား Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန် လာပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ် ပါတယ်။ စစ်တ မ်းတွေ အရဆိုရင် Relationship တွေမှာ မိန်းကလေးတွေ ဘက်ကနေ အရင် စပြီး လမ်းခွဲ တာများပါတယ်။ ယောက်ျား အများစုက လမ်းခွဲ ရအောင် ဆိုတဲ့ စကားကို သူတို့ဘက်ကနေ အရင်စပြီး ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမယ့် တစ်ဖက် မိန်းကလေး သူ့အပေါ် စိတ်ပျက်ပြီး လမ်းခွဲချင်လာအောင် လုပ်ပြ၊ နေပြတတ်ကြပါတယ်။ နှုတ်ကနေ၊ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မပြောပေမယ့် သူကိုယ့်ကို လမ်းခွဲချင်နေပြီဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..? …
အရွယ်ရောက် လာတဲ့ သူတိုင်း သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဘဝ သင်ခန်းစာများ
အရွယ်ရောက် လာတဲ့ သူတိုင်း သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဘဝ သင်ခန်းစာများ အသက်တွေ ကြီးလာလေလေ လူ့လောက အကြောင်း သိလာလေလေ ပါပဲ။ လူတိုင်းက ငယ်ရွယ်စဉ် ဘာမှ သိပ်မသိတဲ့ အချိန်ကနေ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံရင်း ဝမ်းနည်းရင်း ပျော်ရွှင်ရင်းနဲ့ လူတွေနဲ့ လောက အကြောင်းကို ပိုပြီး သိလာ ကြရတာ သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက် လာတဲ့ သူတိုင်း ကတော့ လောကကြီးရဲ့ အခုလို အကြောင်းအရာတွေကို သိထားသင့် ပါတယ်။ (၁) လူတိုင်းကို မယုံရဘူး ကိုယ်ကလွဲရင် ကိုယ့်ဒူးတောင် ယုံလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ စကားက ဒါကြောင့် ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
“စောင့်စည်းမှကောင်းမည်” ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် လူမှာ …. ငါးပါးသီလ ကတော့ လျှော့လို့ မရတော့ ဘူး။ တချို့က သုရာမေရယလေးတော့ လျှော့ပြီး လေးပါးပဲ တည်ပါ မယ်လေ၊ တချို့က မုသာဝါဒလေးတော့ လျှော့ပါ မယ်လေ စသည်ဖြင့် လျှော့ချင်ကြတယ်။ စဉ်းစားကြည့် ပေါ့။ ပစ္စည်းဥစ္စာပေါပေမဲ့ … အသက်တိုရင် ဘယ်နှယ့်နေမလဲ။ အသက်ရှည် ချင်ရင်… ပါဏာတိပါတလည်း ထိန်းရမယ်။ အသက်တော့ ရှည်ပါရဲ့၊ ဆင်းရဲ လိုက် တာ ဆိုရင်ကော ဖြစ် ချင် ပါ့ မ လား ။ မဆင်းရဲ ချင်ရင် အဒိန္နာဒါနာ လည်း ထိန်း ရ မယ် …